အသင့်သုံး သနပ်ခါးဘူးများ ပေါ်လာသော်လည်း ကျောက်ပျဉ်များ ရောင်းအား ကျဆင်းမှုမရှိ ဟုဆို - Yangon Media Group
မကွေး၊ အောက်တိုဘာ ၁၃
အသင့်သုံးသနပ်ခါးဘူးများပေါ်လာသော်လည်း အညာဒေသထွက်ကျောက်ပျဉ်များရောင်းအားကျဆင်းမှုမရှိ ကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့မှ ကျောက်ပျဉ်ရောင်း ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးထံမှသိရသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် သနပ် ခါးသွေးစရာမလိုဘဲ အသင့်လိမ်းချယ်၍ရသော ရယ်ဒီမိတ်သနပ် ခါးဘူးများ၊ သနပ်ခါးခဲများများစွာ ဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်လာ သော်လည်း သနပ်ခါးတုံးများကို သွေးသည့် ကျောက်ပျဉ်များမှာ ရောင်းအားကျသွားခြင်းမရှိ ကြောင်း သိရသည်။
”ရယ်ဒီမိတ်သနပ်ခါးကို ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေ အလုပ်ရှုပ်တဲ့သူတွေဘဲ သုံးတာပါ။ အခုနောက် ပိုင်းမှာ ခရီးသွားတဲ့သူတွေဆို ခရီး ဆောင်ကျောက်ပျဉ်ဆိုပြီး သေး သေးလေးတွေဝယ်ကြပါတယ်။ အိမ်နေရင်း သနပ်ခါးအတုံးကို သွေးလိမ်းကြတာပါ။ သနပ်ခါးတုံး ရှင်မတောင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကျောက်ပျဉ်ကောင်းကောင်းသွေးလိမ်းရင် ရယ်ဒီမိတ်တွေနဲ့ဘာဆိုင် တာမှတ်လို့ ရယ်ဒီမိတ်သနပ်ခါး တွေဘယ်လောက်ဈေးကွက်ထဲ ဝင်ဝင် ကျောက်ပျဉ်တွေ သနပ်ခါးတုံးတွေကတော့ ရောင်းကောင်း နေမှာပါ”ဟု ရွှေစင်ကျောက်ပျဉ်၊ ငရုတ်ဆုံရောင်းဝယ်ရေးမှ ဦးအောင် မောင်းက ပြောကြားသည်။
၁၂ လရာသီပွဲတော်များတွင် ဘုရားရက်ရှည်တစ်လခန့်ကျင်းပသည့် ပွဲတော်များ၌ ကျောက်ပျဉ်အချပ်ရေ ၂ဝဝဝ ခန့် ရောင်း ရပြီး ဘုရားပွဲ ၁ဝ ရက်ခန့်တိုးကျင်းပပါက ကျောက်ပျဉ် ၃ဝဝ ခန့်အ ထိနှစ်စဉ် ရောင်းချရသည်။ ကျောက်ပျဉ်များ၏ဈေးများမှာ ငါးလက်မကျောက်ပျဉ်တစ်ချပ်ကျပ် ၈ဝဝ၊ ခုနစ်လက်မကျောက် ပျဉ် ကျပ် ၁၅ဝဝ၊ ၁ဝ လက်မ ကျောက်ပျဉ် ကျပ် ၂ဝဝဝ၊ ၁၂ လက်မကျောက်ပျဉ်အထူ ကျပ် ၈ဝဝဝ ခန့်အထိ ဈေးအမျိုးမျိုး ရှိပြီး ကျောက်ပျဉ်များမှာ ဂွေးချို ကျောက်ပျဉ်၊ စစ်ကိုင်းကျောက်ပျဉ် နှင့် ကသာကျောက်ပျဉ်စသည့် ကျောက်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးငယ်များ ဂုဏ်ယူ အားကျလိုစိတ် ကိန်းအောင်းသွားစေရန် တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ကလေးစာပေပွဲတော?
သောင်ရင်းမြစ်ရေ ပြန်လည်ကျဆင်း၊ ရေဘေးရှောင် ပြည်သူများ နေအိမ်များသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့
နှလုံးသား ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ဟု အိုဇေးလ် ဆို၊ ဆန်းချက်ဇ် အပြီး ပရီးမီးယားလိဂ??